> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MOV (Quicktime) in 3GP
MOV markii hore ee ay soo Apple sida qaab file ay ciyaaryahanka movie QuickTime ah. Hadda waxaan u arkaan waxaa inta badan loo isticmaalaa in websites, oo inta badan loogu cod ama video. Oo loo maqli karo waxaa taageera dhowaad dhammaan qalabka iyo barnaamijyada Apple, sida Apple Lugood, iPad, iPhone4 / 4s, iPod, iwm Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad ka ciyaaro aad QuickTime files MOV on telefoonada kale cell iyo telefoonada smart sida HTC, Blackberry , Nokia, iwm, waxaad weli u baahan in iyaga loogu badalo in ay 3GP files (Third Generation Partnership Project). Intaa waxaa dheer, taleefanka gacanta waxaa laga yaabaa in aan awood u leeyahay inuu ciyaaro kala duwan oo dhan ee 3GP videos ay sabab u tahay taageerada codec xadidan on gacanta, sidaas wax soo saarka aad u socon 3GP khuseysaa dhammaan noocyada ka mid ah taleefanka gacanta waa pro ah. Halkan, Wondershare Video Converter si weyn lagu talinayaa.
Wondershare Video Converter qoreysa on awood diinta ka awood badan xawaare aalladda degdeg ah (6X dhakhso), bixinta 1: 1 ratio tayo iyo wax soo saarka aadka u socon. Waa maxay more laga cabsado waa in ay sidoo kale siisaa presets loogu daydo mobile kala duwan (ka shaqeeya weyn ee telefoonka gacanta), iyo muuqaalada tafatirka guud sida goo, dalagga, ku dar Cinwaan iyo watermark. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan.
Diyaarinta: download version ah tijaabo lacag la'aan ah. Tani QuickTime MOV in uu diinta Islaamka 3GP waa cross-madal: Video Converter u Mac (taageertaa Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6) iyo Video Converter (taageertaa Windows 8/7 / XP / Vista) , waxay leeyihiin dhow hawsha iyo hagahan qaadataa Screenshot daaqadaha.
Talaabada 1: shuban QuickTime files MOV in MOV in Converter 3GP
Riix ah "Add Files" icon inay ku shuban QuickTime files MOV ka desktop ama fayl kale. Ama kaliya jiidi videos si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Talaabada 2: Dooro 3GP format sida wax soo saarka
Riix qaab icon dhinaca midig ee interface ugu weyn si ay u helaan liiska qaab wax soo saarka. Qaybta qalabka hoos, ka dibna dooro "Qaabka"> "Video"> "3GP".
Talooyin: waxa kale oo aad dooran kartaa qaab horena u gaar ah model telefoonka gacanta, tusaale ahaan "Device"> "Samsung"> "Fiiro Galaxy".
Talaabada 3: dabakho aad videos (optional)
Ka sokow awood muhiim ah diinta, waxa kale oo aad u xoojin karto videos by hoos ku qoreysa: falinjeeerka, lana siii, codsanaya saamaynta, oo ku biirtay video clips, iwm (midig guji item video ah si ay u helaan suuqa kala Edit).
Talaabada 4: Start QuickTime MOV inay diinta ka 3GP
Riix ah "Beddelaan" button Oo tanuna ha video Converter is ogow of the QuickTime MOV in haya'ad 3GP. Waxay qaadan kartaa muddo ah, taas oo ku xiran file iyo tirada.
Taasi waa! Haddaba tag raaxaysan faylasha la gediyay ah ee aad taleefan smart!